TV မှာလာမယ့် သူမပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို အရင်လိုပဲအားပေးကြဖို့ ပရိတ်သတ်တွေကိုပြောကြားလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး – Maythadin
May Thadin | November 24, 2021 | Cele News | No Comments
နေခြည်ဦးက Beauty Blogger အဖြစ် လူမှုကွန်ယ.က်စာမျက်နှာထက်မှာ .အရင်ဆုံးအောင်မြင်လာ.ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ.တော့ နေခြည်ဦးက ကြော်ငြာ.လေးတွေရိုက်ကူးရင်း သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရုပ်ရှင်ဇာ.တ်ကားကြီးတွေ လက်ခံရိုက်ကူးလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါ.တယ်။
နေခြည်ဦး ဟာ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာ ပြည်သူ..တွေ ခံစားနေရတဲ့ မတရားမှုတွေကို .ဆန့်ကျင်ရေး.မှာ ပါဝင် လှုပ်ရှားမှု မရှိသလိုမိမိ…ရရှိထားတဲ့ အောင်မြင်မှု ကို အသုံးချခြင်း… မပြုပဲစံပြပုဂ္ဂိုလ်.. အနေနဲ့မရှိနေ ခဲ့..တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ social punishment အပြင်းအထန်လုပ်ခံ..ရသူလဲဖြစ်ပါတယ်NUG profile တွေနဲ့ တချီချီ လုပ်နေ .ရင်တော့ social punishment လည်း ဘာမှ.အသုံးမဝင်ဘူးနော်
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် ကနေ အချိန်အတော်ကြာပျောက်နေတဲ့ နေခြည်ဦး.တစ်ယောက် ပြန်ပေါ်. လာပါပြီနော်။ အရင်လို သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု.တွေတဖြည်းဖြည်းချင်းစီ ပြန်တင်လာ.တာကို ပရိသတ်တွေ.သတိထားမိကြမယ် .ထင်ပါတယ်နော်။။အခုလဲ .သူမအကောင့်မှာ “လေပြေနုလေး.တွေ သယ်ဆောင်လာပေးမယ်နေ့်နေ့လေး .ဖြစ်ပါစေ
” ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံတွေ စတင် လာပါပြီနော်။တင်ထားတဲ့ ပုံအရတော့ .သူမ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းက ပုံများဖြစ်ပါတယ် comment တွင်လည်း tvမှာ ပြန်ပြတော့မှာမို့ အားပေးဖို့ တိုက်တွန်းနေပါတယ်လူတွေက
Social Punishmentလုပ်ကြဖို့ တဖွဖွ ပြောနေကြသူတွေလည်း အခုဆိုရင် နေခြည်ဦးရဲ့ ပရိသတ်တွေအဖြစ်ပြန်ပြီး မြင်တွေ့နေရပါပြီနော်.ပရိတ်သတ်ကြီးရေ နေခြည်ဦးကိုအရင်လိုပဲအားပေးအုံးမှာလားဆိုတာကိုပြောခဲ့ပါအုံးနော်။
ေနျခည္ဦးက Beauty Blogger အျဖစ္ လူမႈကြန္ယ.က္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ .အရင္ဆုံးေအာင္ျမင္လာ.ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာ.ေတာ့ ေနျခည္ဦးက ေၾကာ္ျငာ.ေလးေတြရိုက္ကူးရင္း သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာ.တ္ကားႀကီးေတြ လက္ခံရိုက္ကူးလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါ.တယ္။
ေနျခည္ဦး ဟာ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာ ျပည္သူ..ေတြ ခံစားေနရတဲ့ မတရားမႈေတြကို .ဆန႔္က်င္ေရး.မွာ ပါဝင္ လႈပ္ရွားမႈ မရွိသလိုမိမိ…ရရွိထားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ကို အသုံးခ်ျခင္း… မျပဳပဲစံျပပုဂၢိဳလ္.. အေနနဲ႕မရွိေန ခဲ့..တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ social punishment အျပင္းအထန္လုပ္ခံ..ရသူလဲျဖစ္ပါတယ္NUG profile ေတြနဲ႕ တခ်ီခ်ီ လုပ္ေန .ရင္ေတာ့ social punishment လည္း ဘာမွ.အသုံးမဝင္ဘူးေနာ္
ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚ ကေန အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေပ်ာက္ေနတဲ့ ေနျခည္ဦး.တစ္ေယာက္ ျပန္ေပၚ. လာပါၿပီေနာ္။ အရင္လို သူမရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ.ေတြတျဖည္းျဖည္းခ်င္းစီ ျပန္တင္လာ.တာကို ပရိသတ္ေတြ.သတိထားမိၾကမယ္ .ထင္ပါတယ္ေနာ္။။အခုလဲ .သူမအေကာင့္မွာ “ေလေျပႏုေလး.ေတြ သယ္ေဆာင္လာေပးမယ္ေန႔္ေန႕ေလး .ျဖစ္ပါေစ
” ဆိုၿပီး ဓာတ္ပုံေတြ စတင္ လာပါၿပီေနာ္။တင္ထားတဲ့ ပုံအရေတာ့ .သူမ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းက ပုံမ်ားျဖစ္ပါတယ္ comment တြင္လည္း tvမွာ ျပန္ျပေတာ့မွာမို႔ အားေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေနပါတယ္လူေတြက
Social Punishmentလုပ္ၾကဖို႔ တဖြဖြ ေျပာေနၾကသူေတြလည္း အခုဆိုရင္ ေနျခည္ဦးရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအျဖစ္ျပန္ၿပီး ျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီေနာ္.ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ေနျခည္ဦးကိုအရင္လိုပဲအားေပးအုံးမွာလားဆိုတာကိုေျပာခဲ့ပါအုံးေနာ္။
အဆိပ်ပြင်း အသားစားမျိုးနွယ် ပဒူတကောင် အကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်..
ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့ အသက်(၆၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သာသနာ့ဘောင်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်ခိုင်
ထန်ထလန်မြို့လေးကို မီးလောင်တိုင်သွင်းခဲ့ကြတဲ့သူတွေအား ပြင်းထန်ထိရှိတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့နာကျည်းစွာပြောဆိုလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု